Mihodina - K-Tek Machining Co., Ltd.
Inona no fihodinan'ny CNC?
Ny lathe CNC dia fitaovana milina mandeha ho azy avo lenta sy avo lenta. Ampiasaina amin'ny turret multi-station na herinaratra turret, ny fitaovana milina dia manana teknolojia fanodinana marobe, afaka mandrindra varingarin'ny tsipika, varingarina diagonaly, arcs ary karazan-tsasatra maro karazana toy ny kofehy sy ny lava-drano, miaraka amina interpolation mivantana sy interpolation boribory.
Amin'ny fihodinan'ny CNC, ny baoritra materialy dia tazomina ao anaty chuck ary ahodina, ary ny fitaovana dia omena amin'ny zoro isan-karazany, ary endrika fitaovana maro no azo ampiasaina hamoronana endrika irina. Rehefa manana fihodinana sy fikosoham-bary ny foibe dia azonao atao ny mampiato ny fihodinana mba hahafahan'ny milina hafa endrika. Ity teknolojia ity dia mamela karazana endrika, habe ary karazana fitaovana isan-karazany.
Ny fitaovan'ny lathe CNC sy ny ivon'ny fihodinana dia miorina amin'ny turret. Mampiasa mpandrindra CNC izahay miaraka amin'ny fitaovana "tena izy" (oh: Pioneer Service), izay manakana ny fihodinana ihany koa ary manampy asa hafa toa ny fandavahana, fantson-drano ary ny faritra fanodinana azy.
Raha mila mihodina CNC ianao dia iray amin'ireo mpanamboatra mahay indrindra sy mpifaninana vidy indrindra izahay, ny ekipanay dia afaka mamokatra entana ara-dalàna sy ara-potoana. Ny fahamaroan'ny fahaizan'ny famokarana dia mamela an'i K-Tek hanolotra ampahany santionany miavaka. Ny fitaovana famokarana faobe dia manome antoka ny fahafaha-miovaova sy ny fahatokisana anay. Ary hihaona amin'ny filan'ny indostria rehetra tompoinay miaraka amina fenitra henjana ampy izahay. Mifantoka amin'ny kalitao sy ny serivisy ho an'ny mpanjifa izahay.
Manodina ny faritra ampiasainay
Izahay dia namokatra faritra maro samihafa mihodina amin'ny CNC tao anatin'ny 10 taona ary ny ekipanay injeniera dia nanome vahaolana mahasoa hatrany amin'ny mpanjifanay hamahana ny olan'izy ireo amin'ny famokarana faritra mihodina amin'ny CNC. Izahay dia miantoka ny milina avo lenta tsy tapaka, na eo amin'ny lafiny sarotra aza, amin'ny alàlan'ny modules masinina sarotra sy amin'ny fampiasana latina CNC mahay hampiasa ny masinina.
Machining Option amin'ny fihodinan'ny CNC
Miaraka amin'ny fitaovantsika farany sy avo lenta izay ahitana ivon-toerana mihodina CNC sy milina familiana 6-axis. Manolotra safidy isan-karazany amin'ny fanamboarana izahay. Na ampahany nivadika tsotra na sarotra, na faritra efa niodina ela na fohy, dia voaomana tsara isika amin'ny ambaratonga sarotra rehetra.
Famolavolana prototype / famokarana andian-dahatsoratra aotra
Famokarana bitika kely
Famokarana habe antonony antonony
Ireto fitaovana henjana manaraka ireto dia matetika ampiasaina: aluminium, vy vy, varahina, nylon, vy, acetal, polycarbonate, acrylic, varahina, PTFE, titanium, ABS, PVC, varahina sns.